Momba anay - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Shuer Medical dia orinasam-teknolojia avo lenta manam-pahaizana amin'ny famokarana sarontava serial Gesala, toy ny saron-tava planar sivily, sarontava planar médika, sarontava fandidiana, saron-tava KN95, sarontava PM2.5, saron-tava FFP2 miendrika kaopy, saron-tava FFP3 miendrika kaopy, namboarina saron-tava, andian-doko fitaizan-jaza graphene ary andian-dahatsoratra mpitsabo mpanampy.
Sichuan Shuer Medical Devices Co., Ltd no sampana feno an'ny Sichuan Juneng Filter Material Co., Ltd.
Tamin'ny taona 2020, Shuer Medical teraka teo ambanin'ny faran'ny governemanta eo an-toerana mba hanao ny asan'ny toby indostrialy vonjy maika, ary io no singa lehibe hanatanterahana ny fisorohana ny valanaretina nasionaly sy ny fiarovana vonjy maika any amin'ny faritra andrefana izay nanorim-ponenana tamin'ny fomba ofisialy tany Chengdu - Aba Distrika indostrialy.
FITONDRANA FAMOKARANA SADY VOAFITRA SY SISTEMA FANAMPIANA FAHAMARINANA.
Shuer Medical dia nanangana andian-tsarimihetsika Gesala sarimihetsika nomerika sy manara-penitra ary rafitra vokatra andian-tsarimihetsika graphene. Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra fampiharana GB sy ny famokarana mari-pahaizana fenon'ny CE an'ny CE. Noho io antony io, manohy manatsara ny fenitra ho an'ny tranga samihafa izahay, indrindra ny fanamarinana ireo vokatra avo lenta, ary manohy mifantoka amin'ny fampivoarana ireo vokatra vaovao graphene avo lenta sy vokatra avo lenta.
Amin'ny maha mpamatsy vokatra flter vaovao azy, i Sichuan Jueneng dia mifantoka amin'ny r & d, famokarana, varotra ary serivisy fanamboarana mel-blow sy vokatra hafa; Misy tsipika famokarana miempo efatra natsonika tato amin'ny orinasa misy anay, izay mamokatra sokajy enina manaraka ireto:
Shuer Medical dia nanomboka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia fampiharana indostrialy graphene, ary nanangana ekipa fikarohana sy fampandrosoana avo lenta miaraka amin'ireo injeniera sy dokotera zokiny indrindra ho toy ny mpikaroka teknika fototra sy matihanina ho fampandrosoana ary manome ny kalitao sy ny mpanjifa hatrany. ampiasao aloha. Hatsarao hatrany ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Antenaina fa ny Shuer Medical no ho singa fototra hiarovana ny vonjy taitra sy ny fiarovana ny firenena any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Sina.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava Ffp3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda,